U.S ကိုရောက်ရှိနေပြီဖြစ်တဲ့ Mitsubishi ရဲ့ 2018 Eclipse Cross မော်ဒယ်သစ်! – AutoMyanmar
U.S ကိုရောက်ရှိနေပြီဖြစ်တဲ့ Mitsubishi ရဲ့ 2018 Eclipse Cross မော်ဒယ်သစ်!
U.S မှာရှိတဲ့ Mitsubishi Motors North America ဟာတော့ 2018 Eclipse Cross CUVs မော်ဒယ်အသစ်တွေကို ပထမဉီးဆုံးလက်ခံရရှိခဲ့တဲ့ ကိုယ်စားလှယ်ပဲဖြစ်ပါတယ်။ 2018 Eclipse Cross CUVs မော်ဒယ်အသစ်ကို မြောက်အမေရိကန်မှာရှိနေတဲ့ Mitsubishi ရဲ့အရောင်းကိုယ်စားလှယ်အားလုံး လက်ခံရရှိသွားမှာဖြစ်ပြီး မတ်လ အစောပိုင်းလောက်မှာစတင်ရောင်းချသွားမှာဖြစ်တယ်လို့ဆိုထားပါတယ်။ Mitsubishi အနေနဲ့ စျေးနှုန်းကို USD 23,295 လောက်အထိ ခန့်မှန်းသတ်မှတ်ထားပါတယ်။ ခန့်မှန်းပြီးသတ်မှတ်ထားတာဖြစ်တာကြောင့် စျေးနှုန်းအပြောင်းအလဲကတော့ရှိမှာပါ။
2018 Eclipse Cross CUVs မော်ဒယ်အသစ်ရဲ့ ထင်ရှားလှတဲ့ feature တွေကတော့ ခေါင်မိုးဖွင့်စနစ်၊ 1.5 လီတာ direct-injection turbo-engine၊ ၇ လက်မ စမတ်ဖုန်း အရွယ်ရှိတဲ့ touch audio ပါဝင်မှု နဲ့ အေးမြတဲ့ရာသီဉတုမှာအနွေးဓာတ်ပေးစွမ်းနိုင်တဲ့ heated rear seats တွေရှိနေမှု အစရှိတာတွေပဲဖြစ်ပါတယ်။ ဒါ့အပြင် AWD (All-wheel drive) ထက်ပိုမိုကောင်းမွန်တဲ့ S-AWC (Super All-wheel control) စနစ်ကိုမြင်တွေ့ရဉီးမှာလည်းဖြစ်ပါတယ်။
Mitsubishi ရဲ့နောက်ဆုံးထွက် 2018 Eclipse Cross ဟာ ကောင်းမွန်လှတဲ့ အရည်အသွေး၊ နည်းပညာပိုင်းနဲ့ မောင်းရတာအဆင်ပြေမှုအပိုင်းတို့ကို Mitsubishi ဆီကအမွေလက်ခံရရှိထားတာဖြစ်တယ်လို့လဲ Mitsubishi Motors North America ရဲ့ Executive vice president and Chief Operating Officer ဖြစ်သူ Don Swearingen ကပြောကြားခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။
Mitsubishi အနေနဲ့ U.S ကို 2018 model အသစ်တင်ပို့တာ အခုနဲ့ဆိုနှစ်ကြိမ်မြှောက်ရှိပါတယ်။ ပထမအကြိမ် U.S ကို Mitsubishi ရဲ့ 2018 model ကိုယ်စားပြုကားအနေနဲ့ရောက်ရှိခဲ့တာကတော့ Mitsubishi Outlander PHEV ဖြစ်ပြီး ၂၀၁၇ ဒီဇင်ဘာလကရောက်ရှိခဲ့တာပဲဖြစ်ပါတယ်။ ကျွန်တော်တို့မြန်မာနိုင်ငံကိုရောက်ရှိဖို့ဆိုရင် အချိန်အတိုင်းအတာတစ်ခုတော့လိုဉီးမှာပါ။